misy olona afaka ve? | DINIKY NY FO
DINIKY NY FO
"Misy tsiambaratelon'ny fo, tsy ho azon'ny saina takarina na oviana na oviana" B. Pascal
misy olona afaka ve?
harilova | 17 Novambra, 2008 18:35
Mandinika momba ny fanafahana (libération) aho, dia mandinika ny tena hevitry ny hoe olon'afaka! Hay arakaraka ny maha-olon'afaka no maha-olon-tsy afaka.Tsy resaka babo sy andevo na zavatra hafa tsy mbola levon'ny sasany na mandratra ny fon'ny hafa no lazaiko, fa ny fahafahana hananan'ny tsirairay!
Ny olona afaka manao zavatra iray, fahafaha-manao sy fahaizanana izany, saingy arakaraka ny hahaizana no hahatsapana fa sombiny ihany no hay! dia miafara amin'ny nolazain'i Socrate momba ny fahendren-drazany ihany hoe : ny hany fantatro dia tsy mahalala n'inon'inona aho!
Ny olona afaka manao izay tiany atao, saingy voararan'ny lalàna sy ny fiaraha-monina ny ankamaroany! Dia voatery mandefitra ihany satria manahirana ny miara-miaina.
Mandika azy amin'ny teny malagasy aho dia tena sahirana hoe atao ahoana ary !
Inona ary ny tena fahafahana?
jereo eto ho an'izay tsy manan-katao be loatra
ara-bakiteny ny teny hoe libertas sy ny libito (hafinaterana, libido) dia iray fihaviana ihany, izay afaka izany dia ara-teorika izay afaka manao ny danin'ny kibony, saingy izany marina ve? Tsy misy olona afaka manao izay rehetra tiany!
Lazain'ny Kristianina fa zavatra dimy no mamaritra ny tena fahafahana marina : 1- voafetra!(fetran'ny tena sy ny tontolo manodidina) 2- safidim-piainana matotra! (nefa rehefa misafidy, mazàva loatra fa itsy horaisina, iroa havela!) 3- fanajàna ny hafa! (samy mananan ny tiany!) 4- azo tsikelikely! (ezaka isan'andro) 5- mandroso ho amin'ny tsara! (! cours arcade// tsy ny namanao no hifaninananao fa ny tsara vitanao omaly).
Dia mandinika aho hoe : mba afaka ve izaho ity?
Fantatro ve ny fetrako? ary ekeko ve ireo izay fanatro fa tsy ho vitako? izay ihany manko no hahafahako mila vonjy amin'ny hafa, tsy noho ny fitiavan-tena fa araka ny lalan'ny fiaraha-monina!
Mba efa nanao safidim-piainana e aho ka namela ireo izay tsy mifanaraka amin'ny safidiko? Na mba farafahakeliny ahay miezaka hahamatotra ny safidy??? Dia tsy ho afaka ny hanao ny tiako intsony aho fa hanao izay tokony hataoko!
Ny niafarany dia hoy aho hoe: mba misy olona afaka ve eto an-tany? sa dia ho nofinofy ihany no atao hoe fahafahana?
Harilova! Misy tsiambaratelon'ny fo izay tsy azon'ny saina takarina na oviana na oviana...
Io fo io no tiako hizara aminao ny tsiambaratelony,
aza miezaka ny hanakatra azy araka ny saina araka izany,
fa miezaha mandinika azy araka ny fo...
dia izay no
DINIKY NY FO...
mba ho zHARY LOVA
Ho an'ny Mpino 
Ny sain'ny olombelona 